OGOOW:-Dumarka ma jecla ragga guskooda ween yahay xog | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada OGOOW:-Dumarka ma jecla ragga guskooda ween yahay xog
Bulsha:- Inkastoo dunida uusan jirin qof isu dheli tirin (kaamil) ah hadana haweenka si weyn ayay ugu fekaraan ninka ay xariirka jaceylka ee guurka ah la sameynayaan , waxa ayna ugu neceb yihiin in ay xariir la sameeyaan ragga tilmaamahaan leh .
1-Nin Caruureed: Waa nin aan garaneyn in mas`uul yahay oo ay qoorta u suran yihiin arimo badan , mana laha wax rajooyin ah oo uu hiigsanayo , waxa uuna mashquul ku yahay wax micno darro ah oo lahwi ah , hadii xaaskiisa qalad ka dhaco ayna la hadasho sida caruurtii ayuu xanaaqayaa .
2-Ninka Dhaawacan: Ninyahoow hadii aad tahay dhibane jaceyl oo jaceyl aad ku soo fashilantay ama furiinba aad soo sameeysay haku deg degin in haweeney cusub durba xariir la sameeyso maxaa yeelay haweenlka ma jela ninka qalbiga ka dhaawacan ee maqane joogaha ah , ee ninyahoow marka qalibigaada ka soo reesto dhawacaas ka dib xariir cusub sameeyso .
3-Ninka Leh Mushkilado Nafsaani ah: Waxa jira ragga leh xanuno dabiici ah oo ah in xilli si weyn u farxad giliyo lamanatiisa oo waxa uu ka dhigayaa haweeneyda ugu farxadda badan aduunka marna midda ugu muragada badan , waa nin dabeecad ahaan is rog rog badan , waa ay adag tahay in gabartu in muddo ah la sii nolaato.
4-Ninka safarka badan: Inkastoo danta ay keeneyso safarka shaqada hadana haweenka ma jecla ninka safarka badan oo waqtigiisa ku qaata banaanka gurigiisa ,ragga noocaas ah ma guleysto xariirkooda.